CNC Rotary ဖြစ်သည် CNC Rotary ဖြစ်သည် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
CNC Rotary ဖြစ်သည်
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏ခြုံငုံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာ & ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် CNC Rotary ဖြစ်သည်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု & ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Marketing, အင်ဂျင်နီယာ, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောစီးပွားရေးပေါင်းစည်းသော။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောအကောင်းဆုံး CNC Rotary ဖြစ်သည် ပြုလုပ်သူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အချိန်အတော်ကြာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့ကျင့်ပေးပါသည်။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများပေးကတိပေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပုံစံ - GXA-170S
CNC Rotary စားပွဲတင်
Worktable အချင်းØ125, Ø170, Ø210, Ø255
သီးသန့်မူပိုင်ခွင့်ရှိသော dual pneumatic piston ဘရိတ်စနစ်.
မြင့်မားသောတိကျလက်ဝါးကပ်တိုင် roller တပ်ဆင်ထားသည်.
dual lead worm drive ဖြင့်ကူးစက်သောဂီယာအပြည့်,ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်.
Worktable အချင်း: Ø၁၇၀ မီလီမီတာ
အလယ်ဘွားအချင်း: Ø40H7 မီလီမီတာ
T ၏အကျယ်-အထိုင်:12H7 မီလီမီတာ
N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၅၂ ကီလို
ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေပြီးနောက် ၁ လခန့်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-rotary.html
အကောင်းဆုံး CNC Rotary ဖြစ်သည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC Rotary ဖြစ်သည် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
CNC Rotary စားပွဲတင်ထူးခြားချက်: Worktable အချင်းØ255, Ø320, Ø400 Big spindle bore သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်. ဒရမ်ဘရိတ်စနစ်ဖြင့် Ultra high clamping force. စုစည်းထားသော spindle ကို radial နှင့်-Axial bearing ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်-၌. dual lead worm drive ဖြင့်ကူးစက်သောဂီယာအပြည့်,ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. သတ်မှတ်ချက်: Worktable အချင်း: Ø၂၅၅ မီလီမီတာ အလယ်ဘွားအချင်း: Ø140H7 မီလီမီတာ စားပွဲအမြင့်(အလျားလိုက်):၂၁၀ မီလီမီတာအလယ်ဗဟို၏အမြင့်(ဒေါင်လိုက်):၁၉၀ မီလီမီတာ T ၏အကျယ်-အထိုင်:12H7 မီလီမီတာ လမ်းညွှန်ဘလောက်အကျယ်:၁၈ မီလီမီတာ ညှပ်နည်း:ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားထိန်းညှိခြင်း:5 MPa ပါ မက်စ်.စားပွဲအမြန်နှုန်း:၂၂.၂ မိနစ်-1 N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၁၁၄ ကီလို မှတ်ချက်: စားပွဲတင်အမြန်နှုန်း ၁ မိနစ်ဖြတ်တောက်နိုင်သော Torque-1. စံတင်သော inertia ကို max table speed တွင်ခွင့်ပြုသည်.အများဆုံး loading inertia လိုအပ်သောအခါအမြန်နှုန်းနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်2လခန့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
CNC Rotary စားပွဲတင်ထူးခြားချက်: Worktable အချင်းØ170, Ø210, Ø255 အမြင့်ကြီးတွေသုံးပါ-တိကျသော crossed roller ဝက်ဝံ. မော်တာကိုညာဘက်အခြမ်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်(ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်နှစ်မျိုးသုံးသည်). မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုလက်ခံပါ,မြင့်မားသောသွားအတိမ်အနက်ကို double ခဲတီကောင် drive ကို. သတ်မှတ်ချက်: Worktable အချင်း: Ø၂၁၀ မီလီမီတာ အလယ်ဘွားအချင်း: Ø40H7 မီလီမီတာ စားပွဲအမြင့်(အလျားလိုက်):၁၅၈ မီလီမီတာအလယ်ဗဟို၏အမြင့်(ဒေါင်လိုက်):၁၆၀ မီလီမီတာ T ၏အကျယ်-အထိုင်:12H7 မီလီမီတာ လမ်းညွှန်ဘလောက်အကျယ်:၁၈ မီလီမီတာ ညှပ်နည်း:Pneumatic ဖိအားထိန်းညှိခြင်း:0.55-0.၇ MPa N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၅၇ ကီလို ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်2လခန့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
CNC စောင်း Rotary စားပွဲတင်
CNC Compact Tilting Rotary Tableထူးခြားချက်: Worktable အချင်းØ255, Ø320 ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်ကို radial နှင့် axial bearings များတပ်ဆင်ထားသည်. dual lead worm drive ဖြင့်ကူးစက်သောဂီယာအပြည့်,ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. သတ်မှတ်ချက်: Worktable အချင်း: Ø320 မီလီမီတာ အလယ်ဘွားအချင်း: Ø180H7 မီလီမီတာ စားပွဲအမြင့်(အလျားလိုက်):355 မီလီမီတာအလယ်ဗဟို၏အမြင့်(ဒေါင်လိုက်):၂၅၅ မီလီမီတာ T ၏အကျယ်-အထိုင်:14H7 မီလီမီတာ လမ်းညွှန်ဘလောက်အကျယ်:၁၈ မီလီမီတာ ညှပ်နည်း:ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားထိန်းညှိခြင်း:5 MPa ပါ အညွှန်းကိန်းတိကျမှု:၁၅ စက္ကန့်. (Rotary ဝင်ရိုး)；စက္ကန့် ၅၀. (ဝင်ရိုးစောင်း) ပြန်လုပ်နိုင်ခြင်း:၆ စက္ကန့်. (Rotary ဝင်ရိုး)；၈ စက္ကန့်. (ဝင်ရိုးစောင်း) စောင်းထောင့်အကွာအဝေး: -30～+၁၂၀ ဒီဂရီ. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်2လခန့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်